Maitiro ekupasa zvakapetwa FIFA, Emulator.online ▷ 🥇
FIFA ndeimwe yeanonyanyo kufarirwa evhidhiyo mutambo wepasi rose. Pasi pebapiro rinodzivirira reElectronic Arts, gore rega rega chitsauko chitsva chemutambo wenhabvu wepamutemo, zvese zvepanyama nedhijitari, zvinorova masherufu ezvitoro nenguva, zvakagadzirira kufadza mamirioni evateveri kubva kumativi ese epasi. Iwe uri mumwe wavo, asi iwe hausi nyanzvi mumutambo; kutaura zvazviri, hauna kunzwisisa kuti hunyanzvi hunoitwa sei.
Kunyanya chaizvo, wanga uchinetseka munguva pfupi yapfuura maitiro ekutora nhanho mbiri muFIFA asi handina kuwana iri nyore dzidziso inotsanangura maitiro kuzviita. Saka ichokwadi? Saka usazvidya moyo: kana uchida, ndinogona kutsanangura maitiro ekuzadzisa chinangwa chako. Kune rimwe divi, kunyangwe kana zvichikwanisika kutamba iwo akateedzana eFIFA mazita uchishandisa chete anokosha makanika, kudzidza hunyanzvi hwakasiyana zvachose "mumhanzi"!
Ko imi munoti kudii? Wakagadzirira here kuongorora kunaka kweiyi "yepamusoro" fekitori weFIFA? Mune mawonero angu haugone kumirira kuti "uise pasi" iye mudziviriri anoedza kudzora vatambi vako iwe uri muchikamu chinogumbura. Ngatiendei, mozowana ruzivo rwese rwenyaya. Handina chasara kuita, kunze kwekushuvira iwe kuverenga kwakanaka uye unakirwe.
Maitiro ekutora nhanho mbiri muFIFA
Maitiro ekudzidzisa muFIFA kutora nhanho mbiri
Maitiro ekutora nhanho mbiri muFIFA Nhare
Usati waenda mune zvese zvemaitiro mukati maitiro ekutora nhanho mbiri muFIFA, Ndinofunga unogona kufarira kuziva zvakawanda nezve iyi "nhabvu yekufamba".
Zvakanaka iyo mbiri yekupfuura ndeye feint inoreva kunyonganisa kana kudzikisira anopikisa. Ndokunge, isu tinoedza kuteedzera kusangana nebhora risinganyatso kuitika, uye tobva tadzorera iyo yekupedzisira kune imwe nhanho iyo mumwe mutambi asingatarisiri.
Muchidimbu, zviri nyore kutaura pane kuita uye zvirokwazvo kana iwe uchitevera nhabvu iwe unotoziva zvauri kutaura nezvazvo. Double Pass yave ichiwanikwa muFIFA kwemakore mazhinji uye inowanzo shandiswa kudzoka kwemapandi emumativi ndokuisa Muchinjiko ari Dhonza.
Mumazita eElectronic Arts akateedzana, muchokwadi, iyo mbiri yekupfuura makanika inonyanya kukosha padyo nenzvimbo yechirango, kunyanya kana uchisangana nevatambi vasati vadzidza kubata zvakanaka zvikamu zvinodzivirira.
Muchidimbu, ini ndinonyatsonzwisisa chikonzero icho chinotyaira iwe kuti ude kudzidza maitiro ekuita iyi feint mumutambo waunofarira wenhabvu wevhidhiyo uyezve gwaro iri riri pano nekuda kweichi chikonzero.
Kana iwe uchinge uchizvibvunza, haufanire kunetseka zvakanyanya nezve chitsauko cheFIFA chauinacho; pane zvese, iwo maviri-ekupfuura makanika akaenzana zvakafanana pane ese edhisheni. Saka iwe unoda kuziva maitiro ekutora nhanho mbiri muFIFA 21, FIFA 20 kana chero chimwe chitsauko mune akateedzana, uchitevera kuraira kwangu iwe unofanirwa kuzadzisa chinangwa chako pasina rimwe dambudziko.
Mushure mekutsanangura muchidimbu zvinangwa nhanho mbiriIni ndaiti inguva yekuita nekutsanangura kuti ungaipfeke sei FIFA.
Kuti uenderere mberi, kana uchinge wapinda mumutambo, mune chero nzira, ingo fambisa iyokuruboshwe analog akananga e direction gadzira iyo analogu chaiyo ita 90 degree "hafu yemwedzi". Paunenge uchidaro, iwe uchaona kuti mutambi wauri kudzora achaita iyo nhanho mbiri.
Iwe uchafanirwa kudzidza mushe ipapo kona kona kune iyo yekufambisa iyo chaiyo analogog. Izvo zvese zvinoenderana neiyo chinzvimbo chemutambi wako, saka iwe unofanirwa kuteerera, semuenzaniso, ku kutanga riini netsvimbo yekuruboshwe uye kupedzisa kufamba kurudyi kana nguva yekuita kumashure.
Nzira chete yekunyatsonzwisisa maitiro ekuita izvi kuedza kuzviita zvakananga uku uchimhanya nebhora mune chero FIFA modhi. Muchidimbu, ndeimwe yeaya hunyanzvi aunofanirwa kuyedza kakati wandei kuti udzidze.
Zviripachena zviri kwauri tungamira fivha kwese kwaunodasaka kuita izvi zvakanaka edza zvakare kakawanda kuita chiito. Muchokwadi, kunyangwe kana iyo mbiri-yekupfuura makanika inogona kuve nyore kuisa mukuita, kuoma kunouya kana zvasvika pakushandisa nemazvo panguva yemitambo yeFIFA.
Kune vamwe vese, FIFA izita rinoridzwa pamwe chete mutongi zvakare paPC, saka maitiro acho akafanana. Chokwadi, zvimwe zvitsauko munhevedzano zvinokutendera kuti ushandise mbeva nekhibhodi, asi ndinokurudzira zvikuru kuti usayedze kuita hunyanzvi nenzira dzekuisa idzi, nekuti unogona kusabudirira uye chero zvodii unozvipinza mungozi.
About Wiki tsananguraMukati meiyo "canonical" mitambo yeElectronic Arts akateedzana, pane nzira dzakakodzera kupfuura vamwe kuyedza kupasa kaviri.
Kunyanya chaizvo, ini ndinokuraira kuti uende, uchitanga kubva kuchiratidziro chikuru che FIFA, mu tab THEATER DZINOGARA. Pano iwe unofanirwa kuwana iyo sarudzo Edza hunyanzvi kana zvirinani hazvo, Kudzidzisa nhandare.
Muchiitiko chekutanga zvinokwanisika kusarudza donha chiitiko, pamwe ivo vemberi, umo mavanokuisa iwe takatarisana nawo mudziviriri anofanirwa kukumisa. Aya mamiriro anogona kubatsira zvakanyanya pakudzidziswa ne nhanho mbiri uye edza kuishandisa kurova anokumhan'arira.
Nekudaro, mune iyo nyaya yeKudzidzisa nhandare, yekupedzisira inoisa iwe pamberi pemubati wechiuno, ichikuvimbisa iwe a yakakwana nzvimbo yemahara chitima nehunyanzvi. Iyi ndiyo nzira inonyanya kukosha yekudzidzira nhanho mbiri, sezvo uine runyararo rwepfungwa pasi rose kuti uzviite.
Kazhinji, yekutanga mbiri yekupasa kuyedza inokundikana zvakakwana, sezvo iri makanika iyo inofanirwa kuyedzwa uye "kuiswa mukati" Saka ndinokuraira kuti udzidzise pano, kuyedza kuenda munzira dzakasiyana uye utore nhanho mbiri.
Nguva shoma dzekutanga, kana usingakwanise kuita hunyanzvi, zvinogona kubatsira gadzira iyo analogu chaiyo ita mamwe kutendeuka, saka unogona kuona zvinorehwa nevekupedzisira. Nekudaro, ini ndinokuraira iwe kuti ushandise nzira iyi chete sekutanga uye wobva wadzidza maitiro ekushandisa nhanho mbiri.
Muchokwadi, kushandisa chaiyo analogu zvishoma "zvisina kurongeka" kunogona kutungamira kuzviito zvisingadiwe mukati memutambo. Muchidimbu, nzira yakanakisa yekudzidza nhanho mbiri, kana uchinge waziva mabhatani, ndeye edza kanoverengeka mu "free munda", kusvikira kumwe kujairana nehunyanzvi kwawanikwa.
Ndinoziva: kuita oparesheni iyi kunogona kuve "kunofinha", asi kana iwe uchida kudzidza kushandisa zvakanaka ma mechanics emutambo, unofanira
Unoti kudii? Waimbotamba FIFA Mobile (aka FIFA Soccer) pane yako smartphone kana piritsi uye ungade here kuziva kana kupfuudza kaviri kuchigona mune iyi vhezheni yemutambo? Hapana dambudziko, ini ndichakurumidza kutsanangura zvese zvaunoda kuti uzive.
Mune ino kesi, iyo hunyanzvi system yemutambo iri chaizvo "mhirizhonga". Muchokwadi, sezvaunogona kuverenga pane yepamutemo Electronic Arts portal, mutambi wega wega ane hunyanzvi hwekufamba, izvo zvinogona kuitwa kuburikidza hover pamusoro pebhokisi re Shot & Skill.
Pakati pehunyanzvi hunowanikwa nenzira iyi ndeizvi iyo Croquette, chitsitsinho chitsitsinho, elastic, bhasikoro and therova bhora mudenga. Naizvozvo, hazvigoneke kuita mbiri-nhanho, kana zvisiri pamwe nemumwe mutambi, asi mune yangu yekutamba ruzivo handisati ndamboona kugona uku mumutambo.
Chero zvazvingaitika, FIFA Nhare yakajeka ine Gameplay yakaganhurirwa kupfuura zvinyakare zvitsauko zvezvakateedzana, uye nekuda kweichi chikonzero, hunyanzvi hunotora chinhanho chekuita mune ino vhezheni yemutambo.
Kune vamwe vese, sezvo iwe uri mutsigiri weElectronic Arts akateedzana, ini ndinokurudzira kuti utarise kune peji resaiti yangu yakatsaurirwa FIFA, kwaunogona kuwana mamwe madhairekitori angave ako.